दर्जनाैं मारिनेगरी जारी जेरूसलेम विवाद किन र कहिलेदेखि ? « News24 : Premium News Channel
दर्जनाैं मारिनेगरी जारी जेरूसलेम विवाद किन र कहिलेदेखि ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेल अभिभस्थित उसको दूतावास जेरुसलेम सार्न केही घण्टाअघि इजरेली फौजले गाजामा एकजना १२ वर्षीय बालकसहित कम्तीमा ५२ जना प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हानी मारिदिएको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नयाँ अमेरिकी दूतावासको उद्घाटन समारोह हुनुअघि इजरेल र गाजा सीमा क्षेत्रमा छ हप्तादेखि भइरहेका व्यापक विरोधप्रदर्शनपछि सैयौँ अन्य घाइते भएका विवरणहरूमा जनाइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का र ज्वाईं ज्यारेड कुस्नरसहित उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू सो उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन्।
स्वागत र निन्दा
दूतावास सार्ने अमेरिकी निर्णयको इजरेलले स्वागत गरेको छ, तर त्यसले व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा निम्त्याएको छ। जेरुसलेमलाई इजरेलको राजधानीको रुपमा अमेरिकाले दिएको मान्यताको प्यालेस्टिनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
जेरुसलेमको पूर्वी भाग आफ्नो भएको दाबी प्यालेस्टिनीहरूले गर्दछन्, तर सो शहर कहिल्यै विभाजित हुन नदिने इजरेलले बताउँछ। गत छ हप्तादेखि भएका व्यापक प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गाजाको इस्लामवादी शासक हमासले गरिरहेको छ।
ट्रम्पले उनको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा तेल अभिभबाट अमेरिकी दूतावास जेरुसलेममा सार्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरेका थिए।
जेरुसलेमको हैसियतसम्बन्धी विवादको सोझो सम्बन्ध इजरेल-प्यालेस्टिनी द्वन्द्वसँग जोडिएको छ।
इजरेल र प्यालेस्टाइन दुवैले उक्त भूमिलाई आफ्नो राजधानी बताउने गरेका छन्। जेरुसलेम शहरलाई इसाई, मुसलमान र यहुदीहरुले पवित्रस्थलका रूपमा मान्ने गर्दछन् ।
जेरुसलेममाथिको इजरेली सार्वभौमिकताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको छैन र सन् १९९३ मा भएको इजरेल-प्यालेस्टाइन शान्ति सम्झौताअनुसार जेरुसलेमको अन्तिम हैसियत भने शान्ति वार्ताका पछिल्ला चरणहरूमा मात्र छलफल हुनेछन्।
सन् १९६७ यता इजरेलले झण्डै २ लाख यहुदीहरूको निम्ति पूर्वी जेरुसलेममा दर्जनौँ बस्तीहरू निर्माण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ती बस्तीहरू गैरकानुनी मानिन्छन् तर इजरेलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अमेरिकी कदमलाई “वास्तविकतालाई दिइएको मान्यता” भनेर टिप्पणी गरेका इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुका लागि यो कूटनीतिक जीत हो। (बिबिसीबाट)
विवादित स्थल गाजामा मृत्यु हुनेकाे संख्या ५५ पुग्याे, १८ सयभन्दा बढी घाइते
चिनियाँ टेलिभिजनको विक्रीमा गिरावट
‘म नपुंसक हुँ तरपनि मेरा तीन बच्चा छन्’
विश्वकै जेष्ठ नागरिक नोनाकाको ११३ बर्षको उमेरमा निधन
अपडेट: मेक्सिकोमा पाइप पड्केर मृत्यु हुनेको संख्या ७३ पुग्यो
पोल्याण्डस्थित जिडान्स्कका मेयर पावेललाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण